किन प्रियंका भन्छिन् 'मेरो नाम बेचेर पैसा कमाउछन् पत्रकार'
पछिल्लो समयको हट केक हुन् प्रियंका कार्की । अभिनयले पोख्त प्रियंकाको चलचित्र व्यवसायिक रुपमा सफल नभएपनि पनि उनी भने विभिन्न विवादले चर्चामा रहन्छिन् । छोटो समयमा नेपाली सिनेमा जगतमा आफ्नो छ्ुट्टै पहिचान बनाएकी कार्की यतिबेला प्रेम सम्बन्धको कारण चर्चामा छिन् ।
दरवारमार्गमा यस्तो अवस्थामा देखा परिन् मिस नेपाल श्रृष्टि श्रेष्ठ
चलचित्र गाजलुबाट डेव्यु गरेकी मिस नेपाल श्रृष्टि श्रेष्ठ अभिनित चलचित्र लाउरेको यतिबेला छायाँकन भइरहेको छ । सुनिल रावलको निर्माण रहेको चलचित्रलाई निगम श्रेष्ठले निर्देशन गरिरहेका छन् ।
न चलचित्र हिटकाे डर न फ्लपकाे, कस्ताे हाेला मेनुकाकाे करियर ?
थिएटर हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् – मेनुका प्रधान । मिडियामा त्यति नदेखिए पनि उनको व्यस्तता चलचित्रमा भ्याइनभ्याइ छ । अब्बल अभिनयको पहिचान बनाएकी मेनुका प्रधानलाई भने आफूले काम गरेको चलचित्र हिट या फल्प केही मतलब छैन ।
दिनेश र नम्रता गर्दै छन् ‘टकिला सनराइज’मा आदित्यलाई ल्याउने तयारी,आर्यन भने आउट!
दिनेश राउत र आर्यन सिग्देलको सम्बन्ध चिसिएको निकै समय भैसकेको छ। अभिनेता आर्यन सिग्देलले निर्देशक दिनेश राउतलाई फेसवुकमा ब्लक हानेको कुराले मीडियामा केहि समय अगाडी निकै राम्रो चर्चा पायो। चलचित्र ‘पर्व’ बाट दिनेश राउत क्याप बाट बाहिरिएका आर्यन यतिबेला रेखा थापा क्यापमा प्रवेश गरेका छन् ।
‘पर्व’को भर पर्दा डुबेकै हो त नम्रता श्रेष्ठको करियर ?
सिने नगरीमा महंगी नायिकाको रूपमा परिचित छिन् नम्रता श्रेष्ठ । सङख्यात्मक हिसाबले थोरै चलचित्रमा काम गरेकी नम्रताका प्राय जसो चलचित्रहरु हिट नै छन् । सुन्दरी नायिकामा पर्ने नम्रताको अब्बल अभिनयको कारण पनि उनको फ्यान फलोइङ राम्रो छ ।
निशाको प्रेममा क्लिन बोल्ड शरद, असार १६ गते हुदैछ बिहे
क्रिकेटर शरद भेष्वाकर र अभिनेत्री निशा अधिकारीको बिहे असार १६ गते हुने भएको छ । प्रेम र व्रेकअपको चर्चा चलेको यो जोडीको बिहेको कार्ड छापिएको छ ।
अभिनेता बिराज भट्ट भन्छन् : नेपालका कलाकारको स्टारडम नै छैन
एक समय यस्तो थियो जुन बेला बिराज भट्ट भन्ने बित्तिकै मनमस्तिकमा एक्सन आइहाल्थो । करिब पाँच वर्ष अघि सम्म बिराज अभिनित प्राय चलचित्रहरु हिट हुने गर्दथे । बिराजले नेपाली चलचित्रको एउटा कालखण्डमा राज नै गरे । उनले झन्डै १० वर्ष चलचित्रमा काम गरे । तर, बिचमा उनी नेपाली सिने नगरीबाट टाढा भए ।
५० रुपैयाँले कलाकार बनेका थिए विल्सन विक्रम राई (तक्मे बुढा)
हास्य टेलिसिरियल ‘मेरी बास्यै’बाट ‘तक्मे बुढा’को रूपमा चिर्चित बनेका हुन कलाकार विल्सन विक्रम राई । पछिल्लो समय उनको व्यस्तता बढ्दो छ । नेपाली चलचित्र लगायत बलिउडका चलचित्रमा पनि उनले काम गरिसकेका छन् । हालै उनी द्वारा निर्मित चलचित्र ‘रातो घर’ प्रदर्शनमा आएको थियो ।
सिनेमा क्षेत्रमा नायक भन्दा नायिकाको आयु छोटो हुन्छ भन्ने गरिन्छ । कुनै बेला हिट हुने नायिकाहरु उमेर ढल्किदै गएपछि सिनेमा क्षेत्रबाट गुमनाम हुने गर्दछन् । यस्तै नेपाली सिनेमाका प्राय जसो पुराना केही नायिकाहरु यतिबेला आफ्नो घरगृहस्थी समाल्दै बसिरहेका छन् भने कति बिदेश पलायन भइसकेका छन् ।